Sexy V Neck Front Dhanka Garabka Garabka Mid Ka Mid Ah Gabdhaha Bikini Set |
Sexy V Neck Front In ka badan Garabyada Garabka Mid ka mid ah Gabdhaha Bikini Set
Qaab dhismeedka Waxyaabaha: Dharka dharkan dabbaasha ah ee tankini ka samaysan ayaa ka samaysan 82% polyester iyo 18% spandex. Dharka fidsan waa mid aad u adag oo raaxo leh.
Naqshadeynta qoorta ee loo yaqaan 'v v' naqshadeynta hore iyo garabka garbaha oo leh xiisad kacsi leh oo si faahfaahsan gadaal ugalaab, ka dhig dabaasha tankini mid aad u qurux badan.
Qeybta hoose ee bikini waxay leedahay laba xargo oo dhinacyada ku xiraya hore iyo gadaal,dhammaystirka laba-laabashada garbaha. Waxay kaa dhigi doontaa inaad dareento wanaag iyo soo jiidasho leh inaad noqoto muuqaal qurux badan.
Dharkaan caloosha xakamaynta dharka ku habboon xeebta, barkadda, xafladda biyaha iyo fasaxyada kuleylaha. Aynu isku duubnaano xilliga maqaarka!
Waxaan haynaa cabirro kala duwan oo Mareykan ah oo aad heli karto, S (US 0-2), M (US 4-6), L (US 8-10), XL (US 12-14), 2XL (US 16-18). Fadlan u dooro cabirka saxda ah naftaada. Maalin wanaagsan!
OdModel wuxuu xidhan yahay YAR. Orod aad u rakiban! Hadaad jeceshahay qaabka dabacsan, waxaad dooran kartaa cabbir ka weyn.
Mid ka mid ah dharka dabaasha oo aan gadaal lahayn ayaa leh qoto dheer oo ah v-neckline oo lagu lifaaqay xargaha spaghetti oo la hagaajin karo, koobabka laga saari karo iyo gadaal furan.
ESoo bandhigida qaab daabacan xayawaan casri ah iyo midab adag, waa noocaas oo kale waa inuu lahaadaa!
Kaliya ku dar qoraxda aad jeceshahay iyo koofiyad! Ama waad ku qaabeyn kartaa daboolka, kaarka, kimono iyo muraayadaha indhaha si aad uhesho maalinta xeebta xagaaga!
Dumarka dharka dabbaasha waxay ku habboon yihiin dhinaca xeebta, dhinaca barkadda, fasaxa, dalxiis, dalxiis iyo munaasabado badan.
Hore: Gabdhaha Lynka Si Buuxda Loogu Xidhay Laba Qaybood Oo Xarkaha Qubeyska Suumanka Xakamaynta Caloosha Monokini
Xiga: Kursiga Jilicsan ee Lugta Cheeky Daboolida Mid ka mid ah Dharka Maydhashada Haweenka
Jimicsi / Jirdhis Hal Cabir Qabo Super Stretch L ...
Suuf jilicsan No Fide Up Lugaha Kooxaha Cuncun Litt Free ...
Dhar fidsan oo fidsan oo aan dhammaystirnayn ...
Neefsashada Ku habboon Si Loo Xidho Gabdhaha Jirdhiska Yoga S ...
Eco-Friendly Qoyaanka jilicsan Wicking Spandex Seam ...